Beautiful Horn of Africa: Caqlileey Reer Banii Israa'iil ah
Caqlileey Reer Banii Israa'iil ah
Sida uu soo weriyey Muxamad bin Kacab, waxaa beri jiri jirey wadaad reer Banii Israa’iil oo ahaa nin caqli badan isla markaana ahaa caalim looga dambeeyay garashada cilmiga diiniga iyo maadda. Wadaadkan Reer Banii Iraa’iil ayaa xaaskiisa oo aad iyo aad uu ujeclaa si lama filaan ah ugeeriyootay. Murugo iyo ciil darteed ayuu goostay inuu albaabada xidho oo dib dambe uusan la haasaawin dadkii magaalada ay qaraabada iyo saaxiibada ahaayeen.
Haweeney Reer Banii Israa’iil ah ayaa maqashay murugada wadaadka haysata waxeyna go’aansatay in ay ugu tagto hooygiisa oo ay soo ogaato. Markay gurigii wadaadka tagtay ayey ka codsatay dadkii waardiyeynaayey bal in loo ogolaado iney la kulanto wadaadka sifa ay uweydiiso hal mas’aalo. Kadib markey ogolaansho weydiisatay dad waardiyeynaaye, ayey iska fadhiistay albaabka geeskiisa. Nin waardiye ahaa ayaa wadaadka ugalay una soo sheegay in qof dumar oo marti ah ay debedda u fadhido. Wuxuu faray in lasoo fasaxo waana la fasaxay oo wey ugashay.
Salaan kadib, waxay wadaadkii weydiisay su’aasha ah: “Waxaa jiraa dahab aan kasoo amaahday deriskeyga waana kan aan hadda xidhnahay. Dahabkan muddo dheer ayaan haaystay. Qoftii iska lahayd dahabkan hadda waxay soo dirsatay qof kale oo waxay dooneysaa in aan dahabkeeda ugu sii dhiibo ta lasoo dirsaday. Ee su’aasha aan doonayo in aan ku weydiiyo ayaa waxay tahay: “Ma iska dhiibaa oo ma u celiyaa”? Wadaadkii ayaa wuxuu ugu jawaabay, “haa, waa inaad iska dhiibtaa ood u celisaa illeyn waa amaahe”. Waxay ugu jawaabtay, “sideen ku celin karaa dahab aan intaasi oo sannadood xidhnaa”?. Wadaadkii ayaa wuxuu ku wargeliyay, “in kalgacal iyo wanaag loo muujiyay oo ay mudantahay in qoftii sidaasi kuugu naxariistay aad tixgeliso oo aad u celiso wexeeda”.
Markuu wadaadkii jawaabihii udhammeeyay, ayey ku tidhi, “Allaah hakuu naxariisto”. Waxay wadaadka weydiisay waxa uu sidaas ula murugoonaayo. Waxayna usii raacisay, “ninyahaw Ilaahey wuxuu ku ammaahiyay xaaskaaga wuuna kaa qaaday illeyn asagaa leh oo abuurtay naf walba”. Mar allaale markey hadaladaasi dhegihiisa ku dhaceen ayuu ogaaday in uu qaldanaa.
Posted by Adan Makina at 10:37 PM
Labo Kala Daran
Cagaha Mise Wejiga?
Farsamoyaqaankii Naftiisa Khayaanay
Farta Lee Iigu Fiiq Aan Soo Jabsade
Labadan Mid Dooro
Udugii la Xaday